Articles tagged 'dalny'
ACR's Dalny Mine deal approved 16 August 2014 HARARE - AIM-listed miner African Consolidated Resources (ACR)’s acquisition of Falcon Gold Zimbabwe’s (Falgold) Dalny Mine (Dalny) and associated infrastructure is on course following Falgold shareholders’ approval of the deal. The resolution was passed at an extraordinary general meeting in ...
ACR pursues $18m funding 23 July 2014 HARARE - AIM-listed African Consolidated Resources (ACR) says it remains in negotiations with investors concerning $18 million funding. The miner intends to spend the cash on acquiring Falcon Gold Zimbabwe (Falgold)’s Dalny Mine and to fast track production at its Pickstone Peerless Gold proje...
ACR's Dalny deal awaits shareholder approval 2 July 2014 HARARE - AIM-lIisted miner African Consolidated Resources (ACR) awaits Falcon Gold Zimbabwe (Falgold) shareholders’ approval to finalise the acquisition Dalny Mine (Dalny). The group plans to buy Dalny, wholly-owned by Falgold, for $8 million. Falgold said the Zimbabwe Stock Exchange (ZSE)’...
Dalny weighs down Falgold 20 June 2014 HARARE - Falcon Gold Zimbabwe Limited (Falgold) says its mothballed Dalny Mine (Dalny) weighed down profits for the half year to March 2014 due to revenue channelled to care and maintenance costs. Although the Zimbabwe Stock Exchange-listed mining concern narrowed losses from $2,6 million incu...